ကလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်း သန္ဓေတားဆေးကို ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်သောက်ရမှာလဲ????? ~ Myanmar Online News
မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်းတားဆေးကို ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်သောက်ရမှာလဲ ။ ။
သိကြတဲ့အတိုင်း ဆေးတွေဆိုတာ သူ့ဆိုးကျိုနဲ့သူရှိတဲ့အတွက် မီ;ဖွားပြီးခါစ နို့တိုက် နေတဲ့ မေမေတို့ဆို ပိုလို့တောင် ဆေးသောက်တဲ့နေရာမှာ ဂရုစိုက်ရဦးမှာပါ။ တားဆေးမှာလည်း တားဆေးအလျောက် မသောက်သင့်တဲ့အချိန်မှာ သောက်လိုက်မိရင် မလိုလားအပ်တဲ့ အရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအချက်တွေကို မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း တားဆေးပြန်သောက်တဲ့အခါမှာ သိထားဖို့လိုတာပါ.
ကလေးနို့တိုက်ေနတဲ့အတွက် ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် တားဆေးတွေကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဝယ်သောက်တာမျိုး လုပ်လို့မရပါဘူး။ သောက်မယ့် ဆေးမှာလည်း ဟော်မုန်းတစ်မျိုးတည်းပါတာသောက်မှာလား၊ ပေါင်းထားတဲ့ ဟော်မုန်းတားဆေးတွေ သောက်မလားဆိုတာ အရင်ရွေးသင့်ပါတယ်။
နို့တိုက် နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် တားဆေးသောက်ဆေးသောက်ရမှာ သတိထားရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်။ တားဆေးသောက်ဆေးတော်တော်များများဟာ မိခင်ရဲ့နို့ထွက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတတ်တဲအ့တွက်ကြောင့် မီးဖွားပြီး ၆ ပတ်ကြာမှသာ progestogen ဟော်မုန်းတစ်မျိုးတည်းပါတဲ့ တားဆေးသောက်ဆေးသောက်သင့်ပြီး ၆ပတ်ထက် ကျော်မှသာ ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးပေါင်းထားတဲ့ သောက်ဆေးတွေ သောက်သင့်ပါတယ်။ နို့တိုက်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူးဆိုရင်တော့ progestogen ဟော်မုန်းတစ်မျိုးတည်းပါတဲ့ တားဆေးသောက်ဆေးကို ချက်ချင်းသောက်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် မီးဖွားပြီး ၂၁ရက်လောက် စောင့်ပြီးမှ သောက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
မီးတစျခါဖှားပွီးရငျ သန်ဓအေောငျနိုငျစှမျး ပိုမွငျ့လာတဲ့အတှကျကွောငျ့ မီးဖှားပွီး ပထမကာလဖွစျတဲ့ ၄၅ ရကျမတိုငျခငျမှာတငျ သားဥတှေ ကွှနေိုငျပါတယျ။ အဲဒီ အခြိနျမတိုငျခငျ အတူနမေိလိုကျလို့ကိုယျဝနျရသှားတတျသလို ကိုယျဝနျရှိနတောကို မသိဘဲ သန်ဓတေားဆေးသောကျလိုကျမိရငျ ကလေးမှာ မှေးရာပါ ခြို့ယှငျးခကြျတှေ ရှိသှားနိုငျတာကွောငျ့ မီးဖှားပွီးနောကျပိုငျးတားဆေး သောကျတော့မယျဆိုရငျ ကိုယျဝနျရှိမရှိ သခြောအောငျ တစျခေါကျစစျပွီးမှ တားဆေးသောကျသငျ့ပါတယျ။
ပိုပြီးစိတ်ချချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မီးဖွားပြီးနောက် သန္ဓေတားဆေးစသောက်ပြီးနောက်ပိုင်း ၇ရက်လောက်မှာ အတူနေတာ ရှောင်နိုင်ရင်ရှေုာင် မရှောင်နိုင်ရင် ကွန်ဒုံးသုံးပြီး အကာအကွယ်နဲ့ ဆက်ဆံသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ နောက်ကိုယ်ဝန် တန်းမရဖို့အတွက် စိတ်ချရမှာပါ။
Friday , November 1 ,2019
ကလေးနို့တိုက်နေတဲ့အတွက် ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် တားဆေးတွေကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဝယ်သောက်တာမျိုး လုပ်လို့မရပါဘူး။ သောက်မယ့် ဆေးမှာလည်း ဟော်မုန်းတစ်မျိုးတည်းပါတာသောက်မှာလား၊ ပေါင်းထားတဲ့ ဟော်မုန်းတားဆေးတွေ သောက်မလားဆိုတာ အရင်ရွေးသင့်ပါတယ်။
မီးတစ်ခါဖွားပြီးရင် သန္ဓေအောင်နိုင်စွမ်း ပိုမြင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် မီးဖွားပြီး ပထမကာလဖြစ်တဲ့ ၄၅ ရက်မတိုင်ခင်မှာတင် သားဥတွေ ကြွေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မတိုင်ခင် အတူနေမိလိုက်လို့ကိုယ်ဝန်ရသွားတတ်သလို ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာကို မသိဘဲ သန္ဓေတားဆေးသောက်လိုက်မိရင် ကလေးမှာ မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်တွေ ရှိသွားနိုင်တာကြောင့် မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်းတားဆေး သောက်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ သေချာအောင် တစ်ခေါက်စစ်ပြီးမှ တားဆေးသောက်သင့်ပါတယ်။